स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी - स्वास्थ्य जानकारी - नारी
स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा डा. किरण रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रलायकी प्रमुख विशेषज्ञ डा.रेग्मीलाई नियुक्त गरेको हो । स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार ११ औं वा १२ औं तहमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभवका आधारमा सचिव नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।